Sarimihetsika azonao jerena maimaim-poana amin'ny YouTube (sy ara-dalàna) | Omeo fialamboly aho
Gabriela moran | | Cine, Sinema mahazatra, Sinema araka ny karazany
YouTube dia mbola iray amin'ireo sehatra lehibe sy be mpampiasa indrindra miasa toy ny tambajotra sosialy io. Mizara horonan-tsary ny mpampiasa amin'ny ankapobeny misy ny fahafaha-mijery horonantsary feno maimaim-poana. Na izany aza, misy ny zon'ny mpamorona sy ny lalàna mifehy ny votoatin'ny pejy mba tsy hianjera amin'ny sakana amin'ny lalàna. Amin'ity indray mitoraka ity Manolotra ny sasany amin'ireo sarimihetsika azonao jerena ao amin'ny YouTube maimaim-poana sy ara-dalàna ary manana tetika mahaliana izy io. Raha mpankafy sarimihetsika klasika ianao dia tsy azonao atao ny mijanona tsy mamaky ny atiny nomaniko!
Na dia marina aza fa ny sehatra streaming dia manana ampahany betsaka amin'ny tsena eo amin'ireo mpampiasa azy, ny YouTube kosa dia maneho safidy malalaka miaraka amin'ireo safidy tsy misy amin'ny sehatra hafa. Afaka mahita ny zava-drehetra isika manomboka amin'ny fanadihadiana an-tsary ka hatramin'ny kilasika sarimihetsika mahafinaritra! Manasa anao hanohy hamaky aho mba hahitanao ny tsara indrindra ananan'i YouTube amin'ny raharaha iray sary mihetsika mahazatra izay tsy iharan'ny zon'ny mpamorona.
Ireo safidy asehoko dia mifanitsy amin'ny fotoana nanalaviran'ny teknolojia ny zavatra fantatsika ankehitriny: mainty sy fotsy izy ireo ary ny sasany mifanaraka amin'ny sarimihetsika mangina. Na izany aza, lNy kalitaon'ny tantara dia avo dia avo ary tsy azo isaina ny lanjan'ny kolontsaina. Mampiseho horonantsary misy ifandraisany amin'ny sarimihetsika toa an'i Charles Chaplin, ary koa ny horonan-tsary vampira voalohany, naseho koa ny iray amin'ireo horonantsary zombie mpisava lalana, ary koa tantara misy fahitana avy amin'ny ho avy sy tantara adala mahatafiditra mpamono olona sy hypnosis.
1 Ny fihazakazahana volamena
2 Fanairana ao amin'ny expresso (Nanjavona ilay vehivavy)
3 Nosferatu: feon-kira mahatsiravina
5 Ny alin'ny Maty velona
6 Masinista ny jeneraly
7 Kabinetran'i Dr. Calgary
8 Mbola misy sarimihetsika azonao jerena ara-dalàna ao amin'ny YouTube ve?
Ny fihazakazahana volamena
Izy io dia premiered tamin'ny 1925 ary mpilalao sarimihetsika sarimihetsika Charles Chaplin, izay nanoratra, nitantana ary namokatra ny sarimihetsika ihany koa. "The Golden Rush" dia heverina ho iray amin'ireo sanganasa malaza indrindra ary nahazo fanendrena Oscar roa rehefa navoaka tamin'ny 1942 ilay kinova feo.
Ny adihevitra dia mifototra amin'ny tramp mitady volamena ary nifindra tany Klondike any Canada izay ahatongavana be dia be ny fitaovana sarobidy toy izany. Teny an-dalana dia gaga izy noho ny tafio-drivotra nanery azy hitady fialofana tao amin'ny trano nilaozana izay fonenan'ny mpamono olona mampidi-doza! Mampiditra vahiny fahatelo ao an-trano ny lahatra ary noho ny oram-baratra dia tsy misy afaka miala amin'ilay toerana.
Mianatra miara-miaina amin'ny zavatra azony atao ny miala amin'ny trano ireo olona telo. Rehefa afaka andro vitsivitsy, mitsahatra ny tafio-drivotra ary samy manohy ny diany izay samy manana ny tanjony ny tanjona farany: hitady ny toeram-pitrandrahana volamena!
Nandritra ny làlana nalehan'ny maherifontsika dia nihaona tamin'i Georgia izy. Vehivavy tsara tarehy ifankatiavana nefa nosarahiny ihany tamin'ny farany. Ny tantara dia milaza amintsika zava-niainany maromaro izay tsy maintsy lalovan'ny toetrantsika alohan'ny hahatongavany amin'ny tanjona voalohany. Antony hanamarihana ny zava-bitan'i Chaplin tsy nisy kilema izay namporisika ny mpijery foana tamin'ny hatsikana hafakely izay mampiavaka ny sarimihetsika mainty sy fotsy.
Faly ny fiafaran'ny tantara, satria nahazo izay notadiaviny ilay mahery fo. Na izany aza, amin'ny farany dia tsapany fa izay tena vitany dia zava-dehibe kokoa noho ny volamena notadiaviny.
Fanairana ao amin'ny expresso (Nanjavona ilay vehivavy)
Fampientanentanana mahafinaritra sy kanto feno fisalasalana no drafitry ny lohateny resahina. Navoaka tamin'ny efijery lehibe izy tamin'ny 1938 ary ny New York Times no nilahatra ho sarimihetsika tsara indrindra tamin'io taona io. Horonantsary britanika tarihin'i Alfred Hitchcock izy io, miorina amin'ny tantara "Mihodina ny kodia." Ireo mpihetsiketsika dia i Margaret Lockwood, Paul Lukas, Basil Radford Redgrave ary Dame May Whitty.
Ny teti-dratsy dia milaza amintsika ny dia nody tany a mpivady mpivady miverina any London, tranony. Noho ny toetr'andro ratsy dia voatery mijanona ny lamasinina ka voaro hatrany ny mpandeha; mijanona mandritra ny alina ao amin'ny tanàna lavitra ireo mpivady mpivahiny. Ny ampahany mahaliana dia manomboka rehefa rehefa miverina amin'ny lamasinina izy ireo ary mahatsapa fa mpandeha iray nanjavona. Ilay fitsangatsanganana an-trano mody saika hivadika nofy ratsy!
Lasa ahiahiana ny mpandeha rehetra. Ny fivoaran'ny tantara dia manambara tsiambaratelo mahaliana mihoatra ny iray amin'izy ireo….
Nosferatu: feon-kira mahatsiravina
Raha olon-tiana vampira ianao dia mila mahita izany! Nosferatu no horonantsary voalohany mifandraika amin'ny tena tantaran'i Dracula izay nosoratan'i Bram Stoker. Na eo aza ny zava-misy fa nisy resabe sy olana ara-dalàna nataon'ny talen'ny Friedrich Wilhelm Murnau manoloana ireo mpandova ny tantara tany am-boalohany, ity sarimihetsika ity dia heverina ho fiandohan'ny horonantsary vampira tsara indrindra amin'ny tantaran'ny karazana sarimihetsika.
Mpivady tanora iray kintana amin'ity tantara ity, ilay rangahy manana ny anarany Hutter dia nalefa tany Tranifornia hiasa hanakatona fifanarahana amin'i Count Orlok. Vantany vao napetraka tao amin'ny trano fandraisam-bahiny izy, dia hitan'i Hutter ny antontan-taratasy macabre miresaka momba ny vampira ary mahatonga azy ho liana. Taty aoriana dia nanatrika ny lapan'ny kaonty nifanenany tamin'ny tompony ratsy toetra izy.
Ny andro taorian'ny fitsidihanao ny lapa, Nahita marika roa tamin'ny hatony i Hutter izay mifandraika amin'ny kaikitry ny bibikely. Tsy nanome lanja bebe kokoa an'ilay hetsika izy raha tsy efa dhitany fa teo anatrehan'ny tena vampira izy, Count Orlok!
Ireo marika eo amin'ny hatony dia mamela antsika hametraka ny fanontaniana: Ho izao ve no mangetaheta ra ra i Hutter izay irin'ny vadiny manokana?
Horonantsary mangina fiaviana alemanina navoaka tamin'ny 1926 ary izany nanangana ny zava-misy an'izao tontolo izao tamin'ny 2026 izany hoe 100 taona aty aoriana!
Miresaka amintsika momba ilay fisarahana kilasy sosialy sy fanavakavahana fa misy eo anelanelan'ny roa izay ipetrahan'ny kilasy mpiasa amin'ny faritra ambanin'ny tany ary voarara tsy hivoaka any amin'ny tontolo ivelany. Leo ny fanavakavahana sy ny famoretana ary atosiky ny robot, lNanapa-kevitra ny hikomy amin'ireo olona manana tombontsoa ireo mpiasa. Nandrahona ny handrava ny tanàna sy ny fandriam-pahalemana izay nahitana ireo sokajin'olona manana tombondahiny nahitana ireo manam-pahaizana sy olona manana fahefana ara-toekarena izy ireo.
Mahita tarehin-tsoratra roa lehibe izahay, mpitarika isaky ny kilasy sosialy, ho mpilalao fototra sy mahery fo. Izy ireo no mikarakara ny cmampifanaraka ny fifanarahana mifototra amin'ny fanajana sy fandeferana.
Tena mahaliana ilay fomba fiasa aseho ny ho avy izay tsy dia lavitra loatra intsony ankehitriny.
Metropolis no mandrafitra ny horonantsary voalohany nomena ny sokajy "Memory of the World" nomen'ny UNESCO. Ny fankatoavana dia noho ny halalin'ny fomba namahana ny olana ara-tsosialy.
Ny alin'ny Maty velona
Horonantsary mampihoron-koditra navoaka tamin'ny 1968 ary izany nanova ny karazana sarimihetsika mifantoka amin'ny zombie. Heverin'ny sasany ho sarimihetsika tsara indrindra amin'ity sokajy ity noho ny anjara asan'ny "mandeha maty" amin'ny teti-dratsy ary nisy akony lehibe tamin'ny horonan-tsary hivoaka aorian'io. Noho ny fahombiazana naterak'ity lohahevitra ity dia namorona saga iray misy toko enina. Navoaka tamin'ny taona 1978, 1985, 2005, 2007 ary 2009 ny tohiny.
Ilay sarimihetsika fanokafana, izay misy amin'ny Youtube, dia momba vondron'olona izay mahita fa mitoka-monina amin'ny karazana toeram-piompiana ary miady amin'ny ainy aorian'ny fitsanganan'ny vondron'olona maty. Ny tantara dia manomboka amin'ny rahalahy roa izay mialoka amin'io toerana io ary mahita fa tsy izy ireo irery no miezaka ny ho velona.
Nandritra ny fotoanany, niteraka horohoro teo amin'ireo mpijery ilay horonantsary noho ireo seho mahery setra sy tsy mahafinaritra nataon'ny zombies.
Masinista ny jeneraly
Buster Keaton dia mpilalao malaza tamin'ny andron'i Charles Chaplin. Sarimihetsika mangina, mainty sy fotsy izy io, izay an'ny karazana hatsikana. Izy io dia fampifanarahana ny zava-misy marina nitranga nandritra ny ady an-trano tany Etazonia tamin'ny 1862.
Ny tantara dia milaza amintsika ny fiainan'i Johnnie Gray, mpamily fiaran-dalamby an'ny orinasan-dalamby Andrefana sy Atlantika. Izy dia manana fifandraisana am-pitiavana amin'i Anabelle Lee, izay nangataka azy hiditra amin'ny tafika rehefa nipoaka ny ady. Na izany aza, ny mpandray anjara mavitrika tsy ekena izany satria heverin'izy ireo fa ilaina kokoa ny fahaizany amin'ny maha masinista azy. Rehefa nahalala ny fandavan'ny tafika, ANandao an'i Johnnie ho kanosa i Nabelle.
Elaela vao hihaona indray ilay mpiray tsikombakomba amin'ny tranga tsy ampoizina mametraka ny ainy tsy ho zavatra.
Misy ifandraisany ny resaka fa tsy dia noraisina tsara ny horonantsary nandritra ny première tamin'ny taona 1926, taona maro taty aoriana vao nahazo laza izy io ary noheverina ho iray amin'ireo anjara asa tsara indrindra noraisin'ilay mpilalao.
Kabinetran'i Dr. Calgary
Manohy amin'ny karazana mangina izahay ary miloko mainty sy fotsy. Ny Cabinet of Dr. Calgary dia horonantsary mampihoron-koditra alemanina izay navoaka tamin'ny 1920. Lmitantara ny famonoana olona psychopath iray manana ny fahaiza-manao hypnotis sy mampiasa sleepwalker hanaovana ny heloka bevava izy!
Dr. Calgary no atidoha manararaotra ny fahaizany sy ny fahalemen'ny mpandeha an-dalambe mba hanao fampisehoana iray izay mampiala voly ny mponina. Notantaraina tamin'ny lasa ny tantara ary notantarain'i Francis, iray amin'ireo mpilalao fototra ao amin'ilay tantara.
Amin'ny ankapobeny, ny tantara dia voahodidin'ny fomba fahitana maizina noho ny zava-misy fa miresaka momba ny lohahevitra mifandraika amin'ny hadalana sy lalao saina ny tantara. Ilay sarimihetsika dia heverina ho toy ny sanganasa lehibe indrindra amin'ny sinema mpandala ny fiteny alemanina. Ny script ho an'ilay horonantsary dia mifototra amin'ny zavatra niainan'ny mpamorona azy manokana: Hans Janowitz sy Carl Mayer. Izy ireo dia samy mpampandry tanindrazana ary nanandrana nanambara tamin'ny fomba miavaka ny fahefana ampiasain'ny governemanta amin'ny tafika.
Tsy isalasalana fa mampihetsi-po ara-tsaina izay milalao amin'ny sain'ny mpijery sy ny tsy ampoizina noho ny fomba namoahana ny tantara.
Mbola misy sarimihetsika azonao jerena ara-dalàna ao amin'ny YouTube ve?
Mazava ho azy fa misy! Ireo lohateny natolotro dia tsiro kely amin'ny atiny ara-dalàna izay ho hitantsika. Tamin'ity indray mitoraka ity dia nifantoka tamin'ny horonantsary kilasika izay nahaliana ahy tokoa rehefa nandeha ny fotoana. Lavitra, misy ireo fanadihadiana sy horonan-tsary ankehitriny izay misy ary afaka mankafy azy io ara-dalàna sy maimaim-poana isika.
Tsy te hanao veloma aho raha tsy milaza aloha fa misy tetika tsy hita isa hitadiavana votoaty maimaimpoana amin'ny sehatra toy ny YouTube, kanefa, aleo tadidintsika fa maro amin'ireo fomba fanao ireo no tsy ara-dalàna. Andao hiezaka ny handray anjara amin'ny tontolo tsara kokoa fanalavirana hetsika tsy etika mandika ny zon'ny mpamorona ary izany koa dia mendrika ny asa tafiditra amin'ny famokarana sarimihetsika.
Manantena aho fa mankafy ny fifantenana ny sarimihetsika azonao jerena amin'ny YouTube ara-dalàna!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Omeo fialamboly aho » Cine » Sarimihetsika azonao jerena maimaim-poana amin'ny YouTube (sy ara-dalàna)
Hihaona amin'ny scooter manidina avy any Back to the Future